January 20, 2021 - Khitalin Media
ပျိုမေတွေ သိထားသင့်သော လက်ထပ် ဖို့ လုံးဝမစဉ်းစားသင့်တဲ့ ယောင်္ကျား (၅) မျိုး
January 20, 2021 by Khitalin Media
ကဲ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူက ဘယ်လို ယောင်္ကျား အမျိုးအစားလဲဆိုတာ တွဲလာတဲ့ သက်တမ်းကို ကြည့်ပြီး ပျိုမေ တွေ သိလောက်ပြီပေါ့နော်။ သူတို့ဟာ လက်ထပ် ဖို့ သင့်တော်သလား၊ မသင့်တော်ဘူးလားဆိုတာ ခွဲခြားနိုင်ဖို့ ဟောဒီ အချက်ကလေး တွေကို ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။ ၁။လုပ်သမျှအလုပ်၊ လက်ရှိအလုပ်အားလုံးကို သဘောမကျဖြစ်ကာ စိတ်ပျက်နေတတ်တဲ့ ယောင်္ကျားမျိုး။ တစ်ရက်တစ်ရက် အလုပ်ကြောင့် စိတ်ပျက်လက်မှိုင်ချနေတတ်ပြီး အလုပ်ကိုလည်း မရ ၁။လုပ်သမျှအလုပ်၊ လက်ရှိအလုပ်အားလုံးကို သဘောမကျဖြစ်ကာ စိတ်ပျက်နေတတ်တဲ့ ယောင်္ကျားမျိုး။ တစ်ရက်တစ်ရက် အလုပ်ကြောင့် စိတ်ပျက်လက်မှိုင်ချနေတတ်ပြီး အလုပ်ကိုလည်း မရှိလို့သာ လုပ်နေရတာ၊ သေမလောက် မုန်းနေတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီလိုယောင်္ကျားမျိုးကို ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက်အဖြစ် ရွေးချယ်ဖို့ သေချာစဉ်းစားပါ။ ဒီလို ယောင်္ကျားမျိုးဟာ ဒီ့ထက်ကောင်းတဲ့အလုပ်မျိုးကိုလည်း မရှာချင်ဘူး။ အလုပ်ကိုလည်း လက်ကြောတင်းအောင် မလုပ်ချင်တဲ့သူမျိုး … Read more
မနက်ဆိုသစ်ပင်၊ ညဖက်ဆိုဘီလူးဖြစ်တဲ့ သစ်ဘီလူးအပင်ကို စိုက်မိသူအကြောင်း
မနက်ဆိုသစ်ပင်၊ ညဖက်ဆိုဘီလူးဖြစ်တဲ့ သစ်ဘီလူးအပင်ကို စိုက်မိသူအကြောင်း တောရွာလေးတစ်ရွာ တွင်ဖြစ်၏။ မှောင်မှောင်မဲမဲနှင့်တိတ်ဆိတ်နေလေသည် ။ ထိုအချိန်တွင် စွဲငင်စွာအူလိုက်သော ခွေးအူသံသည် တိတ်ဆိတ်နေသော ညအချိန်ကိုဖောက်ခွဲလိုက်လေသည်။ ထိုအချိန်တွင် ရွာတောင်ပိုင်းမှအော်သံနှင့်အတူ လူအများမီးဒုတ်များ လက်နက်များကိုစွဲကိုင်ကာ သူကြီးအိမ်ရှေ့သို့ရောက်လာကြသည်။ “ သူကြီး သူကြီး မောင်ထုပါအုံး ထစမ်းပါအုံးဟ “ လူအများ၏အော်ဟစ်သံကြောင့်သူကြီးသည် မောင်းကို တစ်ဒူဒူနှင့်စတင်တီးခတ်လိုက်သည်။ ထိုအခါ ရွာတစ်လုံးမှ လူများသည် ဓားလှံလက်နက်များကိုစွဲကိုင်ကာ သူကြီးအိမ်သို့အပြေးအလွှားရောက်ရှိလာကြပါသည်။ သူကြီးလည်းအိမ်ထဲမှထွက်လာပြီး “တောင်ပိုင်းက ဘာဖြစ်လို့လဲကွပြောစမ်းပါအုံးဟ” ထိုအခါ ပွကြီးဆိုသောရွာသားမှ” ကျုပ်တို့အိမ်နားမှာ ခြေသံကြားလို့ ထိကြည့်လိုက်တော့မဲမဲကောင်ကြီးတစ်ကောင် ထောင်ထောင်မောင်းမောင်းနဲ့ သရဲလား တစ္တေလားမသိဘူး အဲဒါကြောင့်ဓားဆွဲပြီးလိုက်လာတာဟုပြောသံအဆုံး တစ်ရွာလုံး လှုပ်ရှာသွားကြသည်။ ထိုအခါ သူကြီးက “ကဲဘာကောင်လဲဆိုတာအတိအကျတော့မသိဘူး အဲတော့ဘုန်းကြီးပင့်ပြီး အန္တရာယ်ကင်းတရားလေး ဘာလေး ရွတ်ကြတာပေါ့ကွာ” ဟုပြောကာ မနက်လင်းသောအခါ … Read more
သင့်ချစ်သူက မကြာခင်သင့်ကို ထားသွားတော့မယ်ဆိုတာ ဖော်ပြနေတဲ့အချက် (၁၁) ချက်…
သင့်ချစ်သူက သင့်ကိုထားသွားတော့မယ် ဆိုတာကို ဖော်ပြနေတဲ့ လက္ခဏာတွေကို သင်သိထားဖို့ လိုပါတယ်။ဒီလက္ခာတွေ သင်တို့နှစ်ယောက်ကြားမှာ ဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ သင့်ဖက်က ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။သင့်ချစ်သူက မကြာခင်သင့်ကို ထားသွားတော့မယ်ဆိုတာ ပြနေတဲ့လက္ခဏာတွေကတော့ ဒီမှာပါ။ (၁) သင့်စိတ်ထဲမှာ သူနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပုံမှန်မဟုတ်သလို၊ တစ်ခုခု မှားနေသလို ခံစားရပါလိမ့်မယ်။သူ့အပြုအမူတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သင့်စိတ်ထဲမှာ ကသိကအောက် အမြဲဖြစ်နေရပါလိမ့်မယ်။ (၂) သင်ဟာသူ့အတွက် အရေးမပါတဲ့ သူတစ်ယောက်လို ခံစားနေရမှာပါ။ သင့်ထက်စာရင် တခြားအရာတွေက သူ့အတွက် ပိုအရေးကြီးနေပါလိမ့်မယ်။ (၃) (လင်မယားဆိုရင်) သင်တို့နှစ်ဦးရဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆက်ဆံရေးဟာ အင်မတန်မှ ပျင်းရိငြီးငွေ့စရာ ကောင်းနေပါ လိမ့်မယ်။ (၄) သူ့ရဲ့အားလပ်ချိန် တော်တော်များများကို သူ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ပဲ ကုန်ဆုံးတော့မှပါ။ သူ့သူငယ်ချင်းတွေက သင့်ထက်ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းနေပြီ မို့လို့ပါ။ (၅) … Read more
မိမိ ချစ်သူကို စိတ်ကွယ်ရာအရပ်၌ ဘဝတစ်ခုလုံး ပုံအပ်သူ မိန်းကလေးများအတွက် ဖတ်ထားဖို့လိုပါတယ်
မိမိ ချစ်သူကို ဆိတ်ကွယ်ရာအရပ်၌ ဘဝတစ်ခုလုံး ပုံအပ်သူ မိန်းကလေးများအတွက် ဖတ်ထားဖို့လိုပါတယ် ချစ်သူကို ဆိတ်ကွယ်ရာအရပ်၌ ဘဝတစ်ခုလုံး ပုံအပ်သူမိန်းကလေးများ ဘာဖြစ်တတ်သလဲ(မိန်းကလေးများအတွက် ဖတ်ထားဖို့လိုပါသည်) ချစ်သူကို ဆိတ်ကွယ်ရာအရပ်၌ ဘဝတစ်ခုလုံး ပုံအပ်လိုက်သူ မိန်းကလေးအချို့တိုးတက်လာသည့် နည်းပညာခေတ်တွင် ဂုဏ် သိက္ခာအရ အသုံးချခံခဲ့ရသော ဖြစ်စဉ်များ ခပ်စိပ်စိပ်ဖြစ်လာပါ သည်။မိန်းကလေးငယ်အချို့ ချစ်သူအမျိုးသားအပေါ် ယုံကြည် မှုလွန်ကဲမိခြင်းနှင့် နည်းပညာကိုတလွဲအသုံးချသော အမျိုးသား အချို့၏ လုပ်ရပ်ကြောင့် သက် ဆိုင်သူနှစ်ဦးသာ သိထားသည့် လျှို့ဝှက်အပ်သော နေထိုင်မှုပုံစံ များသည် ….. Online စာမျက်နှာများ ပေါ်သို့ ဓာတ်ပုံများ၊ ရုပ်သံဖိုင် များအဖြစ် ရောက်လာသည့် ဖြစ် စဉ်များရှိလာသည်။ထိုဖြစ်စဉ်များ၏နောက်တွင် ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအဝိုင်း၏ အထင်သေးရှုတ်ချမှုကို ရင်ဆိုင်ရပြီး ….သက်ဆိုင်သူမိန်းကလေး ငယ်အချို့ … Read more
အချစ်စစ်နှင့်တွေ့တဲ့အခါ အမျိုးသားတွေပြသတဲ့အမူအရာ (၈) မျိုး…
နောက်ဆုံးပို့ဆောင်ဖို့ လာကြိုသည့်သူနှင့်အတူ..မိန်းကလေးတစ်ယောက်သေဆုံးသွားသည်။ သူ … ဒါကို သတိထားမိတဲ့အချိန် သေမင်းဟုယူဆရသည့် ဝတ်ရုံနက်ခြုံထားသောလူကြီးက သူ့ဘေးရောက်နှင့်နေပြီ။ လက်ထဲမှာလည်း တစ်ဖက်က သူကိုင်နေကျ တူရွှင်းအရှည်ကြီးနှင့်။နောက်တစ်ဖက်မှာ လက်ဆွဲသေတ္တာလေးတစ်ခုနှင့်။ သေမင်းက …ထိုမိန်းကလေးကိုပြောသည်၊”လာ … ကလေးမလေး သွားဖို့အချိ်န်တန်ပြီ” မိန်းကလေး …..”ဟင် … မြန်လိုက်တာ … သမီးမှာ လုပ်စရာ အစီအစဉ်တွေ အများကြီးကျန်သေးတယ်” သေမင်း – “တကယ်စိတ်မကောင်းပါဘူး။ အချိန်မရှိတော့လို့ပါ …” မိန်းကလေး – “ဦးလက်ထဲက သေတ္တာထဲမှာ …ဘာတွေထည့်ထားတာလဲ?” သေမင်း – “မင်းနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ဥစ္စာတွေ” မိန်းကလေး – “သမီးနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ဥစ္စာတွေ ဟုတ်လား ? ဦးဆိုလိုတာ သမီးရဲ့အဝတ်အစားတွေ၊ ရွှေတွေ ငွေတွေကိုလား …” … Read more
ဦးဖိုးအေးတို့ မိသားစု သင်္ချိုင်းထဲ မှာ ပေါက်တဲ့ မျှစ်ကို ချိုးယူပြီး စားလိုက်မိကြသောအခါ
ဦးဖိုးအေးတို့ မိသားစု သင်္ချိုင်းထဲ မှာ ပေါက်တဲ့ မျှစ်ကို ချိုးယူပြီး စားလိုက်မိကြသောအခါ. သင်္ချိုင်း ဆိုသည်မှာ* လူတစ်ယောက်က မေးတယ်… “ကိုဖိုးအေး ခင်ဗျား သင်္ချိုင်းထဲက မျှစ်တွေ ယူစားနေတာ မရွှံဘူးလား…? ဖြေ။ ။”ဘာရွှံမလဲကွ လူသေကောင်က ထွက်တဲ့မျှစ်မှ မဟုတ်တာ မြေကြီးထဲက ထွက်တဲ့မျှစ်ပဲ ဘာရွှံစရာရှိလဲ။ သင်္ချိုင်းဆိုတာလဲ မြေကြီးပါပဲကွာ လူတွေသမုတ်ထားလို့သာ သင်္ချိုင်းဖြစ်နေတာပါ ငါဆို ဒီသင်္ချိုင်းက ထွက်တဲ့မျှစ်တွေ စားလာတာ ကြာပါပြီ။ ကြည့်စမ်း ငါ့သားသမီးတွေ ဘယ်လောက်ချောလဲ။ ကျန်းမာရေး ဘယ်လောက်ကောင်းလဲ။ဖျားနာနေတာ မင်းတို့မြင်ဘူးလာ။ဉာဏ်ရည်ဆိုတာလည်း ငါ့သားသမီးတွေ ကျူရှင်တောင်မယူနိုင်ဘူး။ ရွာကနေ ကျပ်ပြင်ကျောင်းသွားတတ်နေရတာ။ မင်းတို့စဉ်းစားကြည့် မြတ်စွာဘုရားတောင်မှ သုသာန်တစ်စ သင်္ချိုင်းဝက လူသေလွှမ်းတဲ့အဝတ်တွေ ကောက်ယူတော်မူပြီး ပံ့သုကူသင်္ကန်းချုပ်ပြီး သုံးဆောင်တော်မူသေးတာ မင်းတို့ငါတို့လို ဘာမှမဟုတ်တဲ့အကောင်တွေက … Read more
အချစ်ကြီးသလောက် အမျက်ကြီးတတ်တဲ့ ဗုဒ္ဓဟူး သားသမီးများအကြောင်း…
ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများသည် ယေဘူယျအားဖြင့် အမှန်တရားကို နှစ်သက်ကြပြီး တစ်ယောက်ထဲ နေထိုင်ရခြင်းကို မြတ်နိုးတက်ကြပါတယ်။ ဘယ်လောက်ပဲ စိတ်ညစ်နေပါစေ ကိုယ်ရဲ့ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများ ပျော်ရွှင်လာအောင် အဆင်ပြေအောင် ကူညီပေးတတ်ပါတယ်နော်. တစ်ခါတလေမှာ သူငယ်ချင်းများအပေါ် နွဲ့ ဆိုး ဆိုးပေမဲ့ ရစ်တတ်ကြပေမဲ့ အနစ်အနာအရမ်းခံတတ်တဲ့ စိတ်ကြောင့် သူငယ်ချင်းများက အရမ်း ခင်မင်နေကြပါတယ် တခါ တစ်ခါ ရုပ်တည်နဲ့ဆေးထိုးတတ်ကြပါတယ်။ကိုယ်နဲ့မသိတဲ့ လူတွေ ရှေ့မှာ တည်တည်တံ့တံ့ နေထိုင်တတ်ကြပေမဲ့ တကယ်ခင်မင်သူများနဲ့ ဆိုရင် ရယ်မော ပြုံးပျော်စွာ နေထိုင်တတ်ကြပါတယ်။ စိတ်ခံစားရတာလည်း အရမ်းလွယ်သလို၊ စိတ်အပြောင်းအလဲ အရမ်းမြန်တဲ့သူတွေပါ၊ ငိုလိုက်ရယ်လိုက်နဲ့ စိတ်ဆိုးလွယ်သလို စိတ်ပြေ လည်းလွယ်ပါတယ်ဗျာ။ခု စိတ်ညစ်နေတယ် ခဏနေ ဟန်ဆောင်ပြီတော့ ပျော်ရွှင်နေသလို နေပြတတ်ပါတယ်။ … Read more
အရမ်းချစ်ကြတဲ့ ချစ်သူ (၂) ဦး မင်္ဂလာဆောင်ခါနီးမှ အဖြစ်ဆိုးနဲ့ကြုံခဲ့ရ
အရမ်းချစ်ကြတဲ့ ချစ်သူ (၂) ဦး မင်္ဂလာဆောင်ခါနီးမှာ သတိုးသမီး ယဉ်တိုက်မှု့ဖြင့်ပွဲ ချင်းပြီးသေဆုံးသွားခြင်းဖြစ်ပါသည်… ရင်နာဖို့ကောင်းလိုက်တာထိုင်းနိုင်ငံ၊ ပထုံဌာနီခရိုင်၊ တလာဖွန်စာမြို့၊ ဝတ်မခေ ဘုန်းကြီးကျောင်းရပ်ကွက်နေ Arasdeg+Sahhet တို့ဟာချစ်သူသက်တမ်း (၇)နှစ် အကြာမှာ နှစ်ဖက်မိဘများ၏သဘောတူချက်များဖြင့် မင်္ဂလာရက်မြတ် အားရွေးချယ်ပြီးရက်သက်တစ်ပတ်အကြာတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည် မင်္ဂလာဆောင်ခါနီး (၁)ရက် အလိုမှ Sahhet(ဇနီးလောင်း)ဖြစ်သူမှာ မင်္ဂလာပွဲအတွက် လိုအပ်တာလေးများသွားဝယ်ရင်း အခုလို ကားတိုက်ပြီး နေရာမှာတွင်ပင် ဆုံးပါးသွားတာကြောင့် ကျန်ရစ်သူArasdeg(ခင်ပွန်းလောင်း)မှာရူးမတတ် အော်ဟစ်ငိုကြွေးနေတဲ့ပုံရိပ်လေးများပါ…ဘယ်လောက်တောင် ပူဆွေးနေရမလဲဆိုတာ မြင်ယောင်ကြည့်တာနဲ့တင် ယူကြုံးမရဖြစ်ရပါတယ်..အချိန်တွေ အကြာကြီးချစ်သူ သက်တမ်း အကြာကြီး လက်တွဲခဲ့ပြီးမှ မမျှော်လင့်ထားတဲ့ ကံကြမ္မာဆိုးကြောင့် ရင်နင့်စရာ ကြုံခဲ့ရတာပါဘဝဆက်တိုင်း ဒီလို အဖြစ်ဆိုးမျိုး မကြုံတွေ့ရပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ချစ်သူတွေလဲ အနားမှာချစ်ခွင့်ကြုံရတုန်းမှ တန်ဖိုးထားလေးစားမှု့ ကိုယ်စီနဲ့ နီးစပ်နိုင်ကြပါစေ…ခရက်ဒစ် Unicode အရမျးခဈြကွတဲ့ ခဈြသူ … Read more
မိန်းမပျက်အင်္ဂါ ၂၅ ချက် ( ပြည့်တန်ဆာတူတဲ့ မိန်းမဆိုတာ )